Maro adag mesh, Maro adag dun, Maro adag Window Screen - Huili
Cajalad Fiberglass ah oo isku-dhejisan
Shaashadda daaqada birta ahama
County Wuqiang Huili Maro adag Co. Ltd, waxaa la aasaasay sanadkii 2008, oo waxaa ku yaalla gobolka wuqiang, hengshui, Hebei china. salka wax soo saarka ugu weyn ee sano ee suuqa kala Maro adag screen.With horumarka, waxa uu noqday ganacsi isku dhafan oo leh cilmi-baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta, dhoofinta iyo iskaashiga. Iyada oo ah mashiinnada maro baaris ballaaran, mashiinada qaabaynta iyo qalab kale oo dhexdhexaad wax soo saarka sare.
Maro adag Fly Screen
Fiberglass Fly shaashadda ayaa laga tolay ka PCV dahaarka hal fiber. Shaashadda cayayaanka Fiberglass-ka waxay ka dhigtaa qalab ku habboon dhismayaasha warshadaha iyo beeraha inay ka ilaaliso duqsiga, kaneecada iyo cayayaanka yar yar ama ujeeddada hawo qaadashada. Nooca ugu caansan ee shaashadaha daaqada waxaa lagu sameeyaa shaashadda cayayaanka ma ...
Shaashadda Cayayaanka 'No-See-Um Fiberglass'
Shaashadda Cayayaanka 'No-See-Um Fibreglass Cayayaanka' shaashadda maroogga ee si fiican loo tolay ayaa loo isticmaalay ka dhanka ah duqsiga iyo kaneecada yar yar, iyadoo saameyn ku yeelatay No-see. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Screen Inseible Screen' ama 'Window Window Screen' oo aan la arki karin. Shaashadan cayayaanka ah ee aan-arag-ummaddu (fiber -lass) badanaa waa midabka dhuxusha. Hooska mugdiga ah ...